Ndezvipi Zvinoreva zveBhaibheri Zvekurota Nezve Kuenda Pamuviri - Zvinoreva Zvemubhaibheri
keyboard pafoni isiri kushanda
kurasikirwa mapikicha pane iphone 6
ipad bhatiri haina kukunda
maitiro ekukwirisa vhoriyamu pane ipad
Zvinoreva bhaibheri pakurota nezvekuparara . Kurota kwekurasikirwa nemucheche kunomiririra zano kana chirongwa chisina kuenda sezvaitarisirwa. zvipingamupinyi, kunonoka, kana kuora mwoyo zvakakanganisa zvirongwa zvako. Kupererwa nepamuviri kunogona zvakare kuratidza mamiriro ezvinhu apo iwe unonzwa wakakanganiswa kana kupunzirwa pamusoro. Inogona zvakare kunongedzera kuhukama hwakakundikana kana mukana.
Kurota pamusoro pekuparara kwepamuviri hakusi kurota kwakajairika , uye vanogara vachirotwa vakadzi vane pamuviri , vakadzi vanotya kubata pamuviri nekuzvara, vakadzi vanoda nhumbu, asi vanoitya, nezvimwe.
Zviroto izvi zviri kukanganisa kunge chiitiko chaicho chekuparara. Misikanzwa chiitiko chakajairika uye vakadzi vazhinji vakapfuura necho chiitiko chisingafadzi uye chinorwadza kamwechete.
Marwadzo ekurasikirwa nemwana asati aberekwa anenge akakomba sekurasikirwa neupenyu . Ndosaka zviroto nezve miscarriage zvichiratidza masimba akasimba akaunganidzwa mukati. Ivo vanowanzo ratidza dzimwe dzakaoma nguva dzatiri kupfuura nazvino muhupenyu hwedu.
Zvinoreva bhaibheri pakurota nezvekuparara
Bhaibheri rinongotaura chete nhumbu mumamiriro ekuropafadzwa nekutukwa pamusoro paIsraeri. In Eksodho 23:26 , Israeri inovimbiswa kuti hapana achatakura kana kushaya mbeu munyika yako kana vakatevera Chibvumirano chaMosesi. Zvakare, mu Hosiya 9:14 , Israeri mune kusateerera vakavimbiswa nhumbu dzinoburitsa / uye mazamu akaoma . Isu tinodzidza kubva muzvikamu izvi kuti kuzvimiririra kwepamuviri kuri mumaoko aMwari. Hatisisiri pasi peMutemo, uye tinogona kuva nechokwadi chekuti Mwari anonzwira tsitsi avo vakatambura nhumbu.
Anochema uye anotambura nesu, nekuda kwekuti Anotida uye anonzwa kurwadziwa kwedu. Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, akavimbisa kutumira Mweya wake kune vese vatendi kuti tirege kuzombopfuura nemumiedzo chete (Johane 14:16). Jesu akati kuna Mateo 28: 20, Uye iva nechokwadi cheizvi: ndinemi nguva dzose, kusvikira kumagumo enyika.
Chero mutendi akatambura nhumbu anofanira kuva nekutenda mutariro ine mbiri yezuva rimwe chete yekuona mwana wake zvakare. Mwana asati aberekwa haasi mucheche chete kana chidimbu chemuviri kuna Mwari, asi ndemumwe wevana vake. Jeremiah 1: 5 inoti Mwari vanotiziva isu tichiri mudumbu. Mariro aJeremia 3:33 anotiudza kuti Mwari haafariri kukuvadza vanhu kana kuvashungurudza. Jesu akavimbisa kutisiya nechipo cherunyararo chakasiyana nechero chinogona kupihwa nenyika (Johane 14:27).
VaRoma 11: 36 inotiyeuchidza kuti zvese zviripo nesimba raMwari uye zvakaitirwa kubwinya kwake. Kunyangwe Asingaiti kutambura kwatiri kuti tirangwe, Anotendera zvinhu kuti zviuye muhupenyu hwedu izvo zvatinogona kushandisa kuunza kubwinya kwaAri. Jesu ndokuti: Ndakuudzai zvinhu izvi, kuti muve nerugare mandiri. Pano panyika muchave nemiedzo mizhinji nekusuwa. Asi shinga, nekuti ini ndakakunda nyika (Johane 16:33).
Vakadzi vane pamuviri vanowanzova nezviroto zvakadaro nekuti vanotya kugara zvakanaka kwevana vavo vasati vaberekwa.
Ivo vanogona zvakare kutya kurasikirwa nemwana kana chimwe chinhu chiri kutadza nepamuviri. Ivo vanogona zvakare kutya maitiro ekuzvara uye mhedzisiro yacho, uye ndosaka kwavo kusaziva kuri kugadzira izvi zvinotyisa zviitiko.
Izvo zvinoonekwa kuti zviroto pamusoro pekuparara zvinowanzorotwa nevakadzi mune yavo yechitatu trimester yepamuviri.
Kune vakadzi vasina pamuviri hope idzi dzinogona kunge dziri yambiro nezve hutano hwavo. Kurota uku kunogona kuvayeuchidza kuti vatarise kune hutano hwavo uye vaende kunovhenekwa kurapwa kuti vagare vakachengeteka.
Kana ukarota uchiita nhumbu uye iwe usina nhumbu zvachose, iwe unofanirwa kuzvibvunza iwe kana wanga uchizvichengeta zvakanaka kana kuti wanga uchiisa panjodzi hutano hwako nehunhu hwekusazvibata pachako.
Kuroora kwepamuviri uye hupenyu hwako chaihwo - Ndeupi kubatana?
Anenge mhando dzese dzemaroto ehusiku dzine zvadzinoreva muhupenyu hwedu hwega. Saizvozvo, kana iwe uri kurota nezvekuparara, pane chimwe chinhu, chinoenderana nekurasikirwa nehupenyu. Nekudaro, kazhinji kazhinji, iyo, kurasika kwepamuviri zvinoreva kuti une njodzi yekurasikirwa nechimwe chinhu.
Iyo inomiririra nzira dzekuvhara muhupenyu hwako uye kutya kwako. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti iwe unogona kuzvigadzirira mushure mekurota kwepamuviri chero rudzi. Iwe unogona kusiira zvese kune rako ramangwana. Zviroto zvakashata zvekubviswa pamuviri uine pamuviri zvinogona kuratidza chisina kunaka. Zvakadaro, unogona kukunda matambudziko nekuedza kwako.
Kurota kwekudzokorora kupfupfudzika
Paunenge uchirwadziwa nepamuviri kurota kakati wandei, hazvishamise. Kurota kunoitikazve nezvekuparara kwemimba kunoratidza njodzi yako yekukundikana nekuda kwekukanganisa kwako. Sezvo iwe zvawakaita kukanganisa kwakasiyana mumazuva apfuura, iwe unodzivisa kutora chero nhanho. Semuenzaniso, unogona kutya kutya kukundikana kutanga bhizinesi idzva. Nekudaro, mushure mekurota hope idzi, unogona kuedza kubvisa kutya kwako kubva muhupenyu.
Kurota kwekutadza kwako kubata ako manzwiro uye nemanzwiro mushure mekusununguka
Amai, avo vachangobva kuve nepamuviri, vangatadza kudzora manzwiro avo. Iwe unogona kunge wakarota nezvechiitiko ichi hupenyu hwako. Kurota uku hakuna kumbobvira kune chirevo chakanaka. Hupenyu hwako hunogona kuve neshanduko shoma dzisinga nyore kudzora kwauri. Nekudaro, iwe unofanirwa kuzvigadzirira iwe mushure mekuva nerudzi urwu rwekurota.
Kurota uchiona kupererwa kwemumwe munhu
Kurota kwako kunogona kukupa iwe nemufananidzo wewaunoda, uyo ari kuita dambudziko rekuparara. Kurota uku kunoratidza kuti une zvinonetsa pamunhu iyeye. Munhu wacho, achioneka muhope dzako, anoda nhungamiro yako. Zvisinei, anogona kunge ari shamwari yako kana hama.
Kurota zvechisimba, zvichikonzera kusasununguka
Unogona kuwana kududzirwa kwakashata kwezvinoreva kurota, uko mhirizhonga yakakonzera kusununguka. Kurota uku kunogona kuratidza kusagadzikana kwako muhupenyu hwako chaihwo.
Kurota kwekubuda ropa panguva yekuzvitakura
Hope dzako dzinogona kunge dzakakuratidza dzakajeka dzvuku dzeropa. Kubuda ropa uku kunomirira kunzwa kwako kwekushaya simba. Sekuvhara kweropa muhope dzako kuri kubuda mumuviri, zvinogona kuratidza kusuwa uye kunzwa kunorwadza.
Nekudaro, isu tawana izvo zvinomiririra kana iwe uchirota zvekuita nhumbu. Paunenge usiri nepamuviri, kuchine mukana wekuva nehope yekuparara iyi. Semuenzaniso, kana mumwe wako kana hama iri nepamuviri, unogona kusangana nechiroto. Sezvo izvi zviroto zvekuparara zviri zvemhando dzakasiyana, unogona kuenda kuburikidza nedudziro.